မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Zaili Engineering Machinery Co. , Ltd.
ကျွန်ုပ်တို့သည်တကယ့်ထုတ်လုပ်သူ၊ zaili ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်း။ , ltd ။ 2012 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ OEM / ODM ၀ န်ဆောင်မှုကိုရရှိနိုင်ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင် ၁၅ နှစ်ကြာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
MOQ သည် ၁ စုံဖြစ်သည်။ T / T, L / C၊ Western Union မှတစ်ဆင့်ငွေပေးချေခြင်းကိုလက်ခံပါသည်။ အခြားစည်းကမ်းချက်များကိုညှိနှိုင်းနိုင်သည်။
အမိန့်အရေအတွက်ဆန့်ကျင် 7-10 အလုပ်လုပ်ရက်
lading ရက်စွဲကိုဆန့်ကျင်ဟိုက်ဒရောလစ် breaker များအတွက် 14 လအာမခံ။ သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် ၂၄ နာရီချက်ချင်းပြီးနောက် - ရောင်းချခြင်း။
မည်သည့်နိုင်ငံများသို့သင်၏ဟိုက်ဒရောလစ် breaker များကိုသင်ထောက်ပံ့ပေးသနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဟိုက်ဒရောလစ်အအေးများကိုအမေရိက၊ ဥရောပသြစတြေးလျ၊ အရှေ့တောင်အာရှနှင့်အာဖရိကတို့အပါအဝင်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ကျော်သို့ရောင်းချသည်။
ဟုတ်ပါတယ်။ OEM ၀ န်ဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့သည်။ သင့်ရဲ့တံဆိပ်သို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်ကိုပေးပို့နိုင်ပြီးထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့တူတူတူတွေကိုလည်းလုပ်တယ်။ ကာလရှည်အာမခံချက်များသည်အဓိကအားဖြင့်စွဲဆောင်သောအရောင်းအရာဖြစ်သည်။ တိုးချဲ့ထားသောအာမခံများသည်များသောအားဖြင့်နှစ်ပေါင်းများစွာမအောင်မြင်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုသာအကျုံးဝင်သည်။ စျေးသက်သက်သာသာနှင့်အရည်အသွေးမပြည့်သောသံတူများသည်ဤ gimmick အာမခံချက်ကိုပေးလေ့ရှိသည်။ တန်ဖိုးနည်းအကန့်အသတ်ရှိသောအာမခံချက်များအပြင်စျေးပေါသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်သူတို့၏သံတူများ၏ ft lbs class power ကိုချဲ့ကားပြောဆိုကြသည်။ များစွာသောအရာများနှင့်ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရစျေးနှုန်းချိုသာလျှင်အရည်အသွေးသည်သာဖြစ်သည်။
အားလုံးရှုပ်ထွေးပါတယ်။ ကျွန်တော်ဘယ်သံတူလိုချင်ပါသလဲ အဘယ်စွမ်းအင်အတန်းကိုကျွန်ုပ်လိုအပ်ပါသလဲအားလုံးရှုပ်ထွေးပါသည်။ ကျွန်တော်ဘယ်သံတူလိုချင်ပါသလဲ ဘယ်စွမ်းအင်အတန်းကိုငါလိုအပ်ပါသလဲ။
သင်၏လေယာဉ်တင်သင်္ဘော၊ ပုံမှန်အလုပ်လျှောက်လွှာ၊ တစ်နှစ်လျှင်အသုံးပြုမည့်နာရီနှင့်သင့်ဘတ်ဂျက်အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါ။ သင်ရွေးချယ်မည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပြီးကျဉ်းမြောင်းပေးပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟိုက်ဒရောလစ်တူ၊ ကိရိယာသစ်နှစ်မျိုး၊ ရေပိုက်နှစ်ခု၊ mounting brackets၊ pin နှင့်ချုံသုံးပစ္စည်းများ၊ နိုက်ထရိုဂျင်ပုလင်း၊ တံဆိပ်ခတ်ပစ္စည်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ချိန်၌ရှင်းလင်းစွာရှင်းပြပါမည်။ လျှို့ဝှက်အပိုများမရှိပါ။
ငါမြေရွေ့လျားပစ္စည်းကိရိယာများအားလုံးရောင်းသောသူသည်ကုန်သည်တစ် ဦး ထံမှတူကိုဝယ်။ ယခုငါမဆိုအကူအညီသို့မဟုတ်ထောက်ခံမှုမရရှိသေး။ ငါဘာလုပ်နိုင်မလဲ?
ဒါကဘုံပြproblemနာဖြစ်တယ်။ သင်၏အရောင်းကိုယ်စားလှယ်၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာသံတူများမဟုတ်သောကြောင့်သင်လိုအပ်သည့်အထောက်အပံ့များမရရှိခဲ့လျှင်သို့မဟုတ်သူသည်သင်၏မေးခွန်းများ၏အဖြေကိုမသိရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။ သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မအာမခံနိုင်ပါ၊ သို့သော်ဖြစ်နိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားမည်သည့်နည်းနှင့်မျှမကူညီနိုင်ပါ။ မင်းရဲ့တူကိုဘယ်မှာဝယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာငါတို့ဂရုမစိုက်ဘူး။ သငျသညျမှီဝဲနှင့်အကူအညီလိုလျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုသာခေါ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှအကူအညီရယူရန်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှမည်သည့်အရာမျှ ၀ ယ်စရာမလိုပါ။ ငါတို့ကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်။
ငါတခြားနေရာများတွင်အသုံးပြုဝယ်သောတူရှိသည်။ ဘာတံဆိပ်လဲဆိုတာမသေချာဘူးလား ငါနဲ့ပြproblemsနာတွေရှိတယ်၊ ငါဘာလုပ်နိုင်လဲ။ အဲဒါကိုဘယ်လိုအစိတ်အပိုင်းတွေရနိုင်မလဲ။ ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့အားဖုန်းခေါ်ပြီးသင်တတ်နိုင်သမျှအချက်အလက်များကိုပေးပါ။ အချိန်တိုင်းအပြုသဘောဆောင်သောရလဒ်ကိုကျွန်ုပ်တို့မပေးနိုင်သော်လည်းသင်တို့အတွက်သင်၏သံတူကိုဖော်ထုတ်ရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားသွားမည်။ သင်၏သံတူ၏ဓါတ်ပုံများနှင့်၎င်းကိုတံဆိပ်ခတ်ထားသောမည်သည့်နံပါတ်များနှင့်မဆိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏တူကိုမှန်ကန်စွာခွဲခြားသိမြင်ရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
တူးဖော်သူများအတွက် Pulverizer, Crusher သည်တူးဖေါ်ရန်အတွက်, တူးဖော်ရန်ညှပ်, HB စီးရီးအနိုင်အထက်, အသံတိတ်အမျိုးအစားအနိုင်အထက်, Breaker သည် Control Valve,